Ɔtee Asɔrefie no Ho Bio | Yesu Asetena
Ɔtee Asɔrefie no Ho Bio
MATEO 21:12, 13, 18, 19 MARKO 11:12-18 LUKA 19:45-48 YOHANE 12:20-27
YESU DOMEE BORƆDƆMA DUA BI NA ƆTEE ASƆREFIE NO HO
YESU WU A, ƐNNA NNIPA PII BƐNYA NKWA
Bere a Yesu ne n’asuafo no fii Yeriko baa Betania no, wɔdii nnansa wɔ hɔ. Afei ɛduu Dwoda, Nisan da a ɛtɔ so 10 no, wɔsii kwan so anɔpatutuutu sɛ wɔrekɔ Yerusalem. Wɔnam kwan so no, ɛkɔm dee Yesu; ɔhuu sɛ borɔdɔma dua bi si hɔ, enti ɔbɛn ho sɛ ɔrekɔpɛ ɛso aba no bi adi. Ɔduu dua no ho no, na aba bi wɔ so anaa?
Ɛyɛ a June mu na borɔdɔma dua taa so aba. Yesu ne n’asuafo no retu kwan no nso na ɛyɛ March mu. Enti bere a Yesu huu sɛ dua no ayɛ frɔmfrɔm no, ɛyɛɛ no sɛ gyama dua no aso ntɛm. Ɔkɔduu ho no, na hwee nni so; ɛdaadaa no! Yesu ka kyerɛɛ dua no sɛ: “Obiara renni wo so aba bio da.” (Marko 11:14) Ɛhɔ ara na dua no fii ase sɛ ɛrewu. Adesuade a ɛwɔ saa asɛm no mu deɛ, ade kyee ansa na asuafo no rehu.
Saa asɛm no sii no, ankyɛ na Yesu ne n’asuafo no kɔduu Yerusalem. Ná Yesu adi kan akɔhwehwɛ asɔrefie hɔ Kwasida awia, na ɔbɛduu Yerusalem Dwoda no nso ɔsan kɔɔ hɔ. Ɛno deɛ, wankɔhwehwɛ hɔ kɛkɛ. Yɛbɛkae a, afe 30 Twam afahyɛ bere no, Yesu kɔpamoo wɔn a na wɔredi dwa wɔ asɔrefie hɔ no; ɛno ara bi na ɔsan kɔyɛe. (Yohane 2:14-16) Ɔsan kɔpamoo “wɔn a wɔretɔn nneɛma ne wɔn a wɔretɔ adeɛ” no. Afei nso ɔkekaa “sikasesafoɔ no apono ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no nkonnwa butubutuiɛ.” (Marko 11:15) Wɔn a na wɔde asɔrefie hɔ ayɛ bomkwan de wɔn nneɛma fa hɔ no, wamma kwan amma wɔamfa hɔ bio.
Adɛn nti na Yesu yɛɛ sikasesafo ne wɔn a wɔtɔn mmoa wɔ asɔrefie hɔ no saa? Ɔkyerɛɛ mu sɛ: “Wɔntwerɛɛ sɛ, ‘Wɔbɛfrɛ me fie mpaebɔ fie ama aman nyinaa anaa’? Nanso mode ayɛ adwotwafoɔ atɛeɛ.” (Marko 11:17) Nea enti a ɔfrɛɛ wɔn adwotwafoɔ ne sɛ na wɔtɔn mmoa a nkurɔfo tɔ de bɔ afɔre no aboɔden. Enti Yesu huu sɛ ɛyɛ nyansakorɔno anaa apoobɔ.
Bere a asɔfo mpanimfoɔ, akyerɛwfo, ne atitiriw no tee nea Yesu ayɛ no, wɔsii wɔn bo sɛ nea ɛte biara a wɔbɛkum no. Nanso, na wɔnhu kwan a wɔbɛfa so anya no akum no, efisɛ daa na nkurɔfo atwa ne ho ahyia retie no. Enti ɛyɛɛ wɔn dadwene kɛse.
Ná amanaman mufo a wɔasakra abɛyɛ Yudafo no nso aba ne Yudafo no rebɛdi Twam afahyɛ no. Helafo a wɔwɔ wɔn mu no kɔka kyerɛɛ Filipo sɛ wɔpɛ sɛ wɔhu Yesu. Nea enti ɛbɛyɛ sɛ Filipo nkyɛn na wɔkɔe ne sɛ, na ne din no yɛ Hela din. Ná Filipo ntumi nhu sɛ ɛyɛ papa sɛ ɔma wɔhu Yesu anaa, enti ɔno nso kɔbɔɔ Andrea amanneɛ. Saa bere no, ɛbɛyɛ sɛ na Yesu wɔ asɔrefie hɔ, enti Filipo ne Andrea de asɛm no kɔtoo Yesu anim.
Ná Yesu nim sɛ ɛrenkyɛ ɔbɛwu, enti na ɛnyɛ afei na ɔrebɛyɛ biribi ama wɔahwɛ anaa ɔrebɛpɛ anuonyam. Ɔde mfatoho maa Filipo ne Andrea mmuaeɛ sɛ: “Ɛdɔn no aduru sɛ wɔbɛhyɛ onipa Ba no animuonyam. Nokorɛ, nokorɛ, mese mo sɛ, sɛ ayuo aba antɔ fam anwu a, ɛda so ara yɛ aba baako; nanso sɛ ɛwu a, ɛso aba pii.”—Yohane 12:23, 24.
Ayuo baako da hɔ a, obiara mmu ho akontaa. Nanso sɛ wode hyɛ fam ma “ɛwu” a, ɛfifiri, na nkakrankakra ɛso aba pii. Saa ara na Yesu nso yɛ onipa baako pɛ a bɔne nni ne ho. Nanso sɛ ɔdi Onyankopɔn nokware kɔsi wuo mu a, ɛnam ne so bɛma nnipa bebree a wɔn nso di nokware ma Onyankopɔn no anya nkwa. Enti Yesu kaa sɛ: “Deɛ ɔpɛ ne kra no sɛe no, na deɛ ɔtan ne kra wɔ wiase yi mu no bɛkora so ama daa nkwa.”—Yohane 12:25.
Yesu anka asɛm no amma ɔno nko ara ho; ɔtoaa so sɛ: “Sɛ obi pɛ sɛ ɔsom me a, ɔnni m’akyi, na baabi a mewɔ no, me somfoɔ no nso bɛba hɔ. Sɛ obi pɛ sɛ ɔsom me a, Agya no bɛdi no ni.” (Yohane 12:26) Wei yɛ akatua kɛse! Ade a Agya no de bɛdi wɔn ni ne sɛ ɔbɛma wɔne Kristo adi ade wɔ Ahenni no mu.
Ná Yesu ani tua sɛ ɔbɛhu amane pii na wɔbɛkum no yayaayaw, enti ɔkaa sɛ: “Afei me kra ho yera no, na ɛdeɛn na menka? Agya, gye me firi dɔn yi mu.” Nanso na Yesu mpɛ sɛ ɔbɛyɛ biribi a ɛbɛsesa Onyankopɔn apɛde. Enti ɔkaa sɛ: “Yei nti na maba dɔn yi mu.” (Yohane 12:27) Onyankopɔn apɛde nko ara na na Yesu pɛ sɛ ɔyɛ, enti sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ ɔwu mpo a, ɔrempopo ne ti.
Ná bere nsoe sɛ borɔdɔma so aba, nanso adɛn nti na Yesu kɔe sɛ ɔrekɔte bi adi?
Wɔn a na wɔdi dwa wɔ asɔrefie hɔ no, adɛn nti na ɛfata sɛ Yesu frɛɛ wɔn “adwotwafoɔ”?
Adɛn nti na yɛbɛtumi de Yesu atoto ayuo aba ho? Amanehunu ne owuo a na ɛda Yesu anim no kaa no sɛn?
Yesu De Nnamyɛ Yɛɛ Onyankopɔn Apɛde